Ity no sary mihetsika HomePod vaovao notarihin'i, Spike Jonze | Avy amin'ny mac aho
Ny mpandahateny vaovao an'ny Apple, ny HomePod, dia hita ao amin'ny a doka vaovao natombok'i Apple ary notarihin'i Spike Jonze. Jonze, dia talen'ny amerikana ary mpamokatra fanta-daza amin'ny habetsaky ny famokarana sy horonan-tsary mifandraika amin'ny mozika notantaniny.
Amin'ity tranga ity ny maherifon'ny doka dia tsy iza fa ny HomePod vao navoakan'i Apple, vokatra mifandraika amin'ny mozika izay toa lavitra ny fanombohana any amin'ny firenena rehetra ankehitriny, fa raha vao mieritreritra azy isika dia hanomboka hizara azy erak'izao tontolo izao i Apple. Raha tsy misy zavatra betsaka holazaina momba ity resaka fanombohana ny Homepod nataon'i Apple ity, ny zavatra tsara indrindra dia jereo ity sarimihetsika fohy vaovao ity izay ho lasa doka Ary efa azo alaina ao amin'ny fantsona YouTube ofisialin'i Apple izany ary azo antoka fa ho hitanao tsy ho ela any amin'ireo firenena namidy ity mpandahateny Apple ity:
Ny dokam-barotra dia kintana amin'ny mpihira britanika sy mpandihy Rantsana FKA, tena anarany Tahliah Debrett Barnett. Rantsankazo FKA, notendrena ho British Breakout Artist sy British Woman Solo Artist tao amin'ny Brit Awards, izay ahafantarana azy eo amin'ny tontolon'ny mozika.
Tsy misy isalasalana fa ny tadiavinay dia ny HomePod azo alaina haingana any amin'ny firenena rehetra ary i Siri, izay mpiady mahery amin'ity toerana vaovao Apple ity rehefa mangataka ny sampana FKA, dia asio mozika tianao. Amin'izao fotoana izao dia miatrika a horonantsary fohy 4 minitra mahery, saingy manana kinova efa ho iray minitra vonona ho an'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ity no sary mihetsika HomePod vaovao notarihin'i, Spike Jonze